Maaskarada Difaaca Jumlada, Soosaarayaasha & Shirkadaha Maaskarada Neefsashada | Xiddig Buluug ah
Shirkaddu waa shirkad ay maalgeliso shisheeye oo ku takhasustay soo saarista waji-ka-ilaalinta.
Maaskaro Iyo Neefsade
Maaskaro Wajiga Mashiinka Fasalka ah & Neefsade
Soo-saarista wanaagsan ee agab gaar ah
Astaanta caanka ah ee loo yaqaan 'Blue Star' oo ah boodh-caddeyn, carfiso iyo anti-microtoxic maaskarada kahortaga iyo suufiyada taxanaha ah ee ay soo saarto shirkadda waxaa lagu soo saaray qalab gaar ah, ilaalin culus, qurux badan oo waara.
Astaanta caanka ah ee loo yaqaan 'Blue Star' oo ah boodh-caddeyn, caraf udgoon iyo anti-microtoxic maaskaro ka hortag ah iyo maaskarada ka hortagga suufka ee ay soo saarto shirkadda waxaa lagu soo saaray qalab gaar ah, ilaalin culus, qurux badan oo waara; maaskarada wejiga neefsashada, diyaaradda dharka aan dharka lahayn ee la tuuro, maaskaro ilaalin oo saddex-cabbir ah, maaskaro Balanbaalis, KN95, maaskaro taxane u eg oo koob ah, maaskaro taxane isboorti ah, maaskaro taxane ah oo caddeyn qabow leh, maaskaro hufan iyo waji kale oo caafimaad; iyaga dhexdooda, waji-furka saddex-geesoodka ah ee carruurta waxaa loogu talagalay si khafiif ah midabyaduna waa ikhtiyaari.
3 Maaskaro Maska Ply
Qalabka aasaasiga ah ee loo isticmaalo buluugga 'Star Star' waa shiraac, caag ama caag heer sare ah. Xulashada waxay kuxirantahay isticmaalka, tusaale ahaan, gudaha ama banaanka. Cimilada sidoo kale waxay kacdaa door muhiim ah sida meelaha leh qoyaan dheer iyo qoyaan. Nidaamkeena adag ee QC iyo maamulku wuxuu xaqiijin karaa tayada sare ee. Adeegsiga sheygan wuxuu ka caawiyaa dadka inay yareeyaan saacadahooda shaqada waxayna ka caawineysaa inay ka yaraato shaqooyinka daallan iyo howlaha culus.
KN95 / FFP2 Mashiinka Dib-u-Isticmaalkiisa
Mashiinka saddax geesoodka ah ee KN95
Maaskaro ilaalin caafimaad
Maaskaro ilaalinaysa caafimaadka
Maaskaro saddex-waji leh oo aan sanka laga gaarin
Maaskaro saddex-geesood ah oo aan sanka laga jarin
Shirkaddu waxay leedahay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001, liisanka wax soo saarka qalabka ilaalinta gaarka ah ee gaarka ah, shahaadada aaladda badbaadada qalabka badbaadada shaqaalaha. Liisanka wax soo saarka qalabka caafimaadka, shahaadada diiwaangelinta qalabka caafimaadka. Shahaadada FDA, CE, oo ku taxan liiska cad ee Wasaaradda Ganacsiga, Shahaadooyinka Shisheeye iyo Ururka Diiwaangalinta iyo Dhoofinta Caafimaadka ee Diiwaangashan.
In ka badan 50 sano, wuxuu ahaa aasaasaha warshadaha maaskarada ee Fujian. Aasaasihii waligiis ma iloobin ujeedkiisii ​​asalka ahaa, wuxuu xasuustay himiladiisa, wuxuu u horseeday dadka Blue Star inay hore u socdaan, wuxuuna ku dadaalay inuu ilaaliyo nolosha dadka shaqeeya ee safka hore. Sannadkii 2020, xaaladdii faafida ahayd ayaa si lama filaan ah u dhacday. Dadka Blue Star ma ilaawin xaalada cudurka faafa dadka naxariis darana waa kalgacal. Iyagoo ka jawaabaya amarkii dowladda ee ahaa inay dib u bilawdo shaqada maalinta koowaad ee sanadka, waxay noqdeen shirkadaha wax iibsiga iyo keydinta ee Golaha Deegaanka.
Ka dalbo Malaysia
Ka dalbo Malaysia: balanbaalis aad u khafiif ah, oo leh sanka oo la gooyo, maro meltblown loo habeeyay, oo lagu daro qalabka nano, oo leh shaqooyin gaar ah Waxay shaqsi ahaan ugu jirtaa baco caafimaad-baco balaastik ah, oo jawi heer sare ah leh.
Xarunta gurmadka degdega ah ee Czech waxaa ku qalabeysan mashiinnada Nafu
Xarunta gurmadka degdega ah ee Czech waxaa lagu qalabeeyaa maaskaro Nafu ah
Xiamen Blue Star Enterprise Co., Ltd. oo la aasaasay 1987.
Iyagoo ku tiirsan Jaamacadda Shiinaha ee Daawada, Fujian Medical University iyo Qilu Medical College ee Jaamacadda Shandong, waxay si wada jir ah xarun xeel dheer oo cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda uga aasaaseen Degmada Xiang'an si ay u fuliso casriyeynta warshadaha iyo ballaarinta khadadka wax soosaarka shirkadda ee ka soo baxa wajiyada ilaaliya, marka hore- fasalka iyo qalabka caafimaadka ee heerka labaad ilaa heerka saddexaad ee caafimaadka Caafimaadka iyo ka hortagga cudurrada faafa sida aaladaha iyo waxyaabaha la isticmaalo, iyadoo la abuurayo madal wax soo saar loogu talagalay qalabka caafimaadka.